Ziva Sei: Huru Dhata Inokanganisa Hutano Hutano Indasitiri - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Yakakura data muhutano, nezveutano, HutanoTech, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Big Data zvirokwazvo izita remazwi nhasi, uye iri kuita kuti nyika ive nzvimbo irinani nekukanganisa zvakanyanya iyo healthcare industry. Huwandu hwe data isu tinowanzo gadzira hwakakura, uye ndozvowo kugona kwedu kuinzwisisa uye kuiongorora kuburikidza nehunyanzvi.
Big data yakaratidza kushandiswa kwayo kunenge kune verticals yese kukanganisa kushambadzira kweinternet, uye nezveutano haisi kumashure kumashure. Big Data in nezveutano inoshandiswa kuvandudza purofiti, kudzora pamusoro pasipo, kufanotaura nhenda, kugadzirisa hupenyu, kurapa zvirwere, uye kudzivirira kufa kusvika padanho rakati.
Kutyaira iko zvino ndekwekuongorora nhoroondo yehupenyu hwemurwere uye maitiro emangwana uchishandisa izvi Big Data muhupenyu hwake hwekare sezvinobvira. Iyi yakaomesesa yekufungidzira modhi inogona kuponesa mamirioni ehupenyu uye kunyange kudzivirira zvirwere zvisati zvanyatso kurwara.
Imwe nyaya inokosha mu nezveutano indasitiri mishonga yakasarudzika. Izvi zvinoda mishonga inogadzirwa zvinoenderana nemagene emunhu nema data zvinoenderana nenzvimbo uye mararamiro. Chokwadi, ichi chingave shanduko yeiyo nezveutano domain.
Big Data inobatsira zvikuru mukurwisa zvirwere. Nzvimbo dzakaita seAfrica, uko hosha dzakadaro dzakatekeshera dzinogona kurondwa maererano nenzvimbo famba nzvimbo dzefoni uye maitiro anogona kufanotaurwa. Izvi zvinopawo nzwisiso yenzvimbo dzakanakisa dzekupa kurapwa uye kupihwa kwemishonga pamberi.
Kuchengeta mupfungwa kuti data yekurapa inofanirwa kunge yakachengeteka zvakanyanya data, chibatiso dziviriro dzinofanirwa kuiswa munzvimbo dzese kuti ive nechokwadi chekuti ruzivo rwunongosvika kune avo vakagadzirirwa. Chero paine chibatiso uye kuvanzika kwedata kunochengetedzwa, ichokwadi kuti Inogona kuita basa rakakura mukuvandudza marapirwo matsva uye kutsanangura nzira yatinonzwisisa nayo miviri yedu.
Wongorora zvimwe zvakanaka zvakananga kubva kunyanzvi dzedu